संयोजकले क्वारेन्टाइनमा बस्नेलाई समय नपुग्दै धकेलेर खेदे – Samacharpati
राजेन्द्र न्यौपाने, गोरखा, ७ वैशाख । जिल्लाको शहिद लखन गाऊँपालिका वडा नम्वर ७ को सामुहिक क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकहरुलाई वडाध्यक्षले गाऊँपालिकाको समय नपुग्दै धकेलेर खेदिएको छ । स्थानीय एक ब्यक्तिसंग विवाद भएको बिषयलाई लिएर वडा नम्वर ७ का अध्यक्ष शरण श्रेष्ठ र ८ का अध्यक्ष काशिनाथ अंगाईले ७ जनालाई घर पठाइदिएका हुन् ।
आफूहरु घर जान्नौं यहिँ बस्छौं भन्दा भन्दै ठेलमठेल गरेर धकेलेर बाहिर निकाले, सुरक्षाको कारण पनि यहाँ बस्न हुँदैन भनेर हामी घर आएर यहाँ पनि अलग्गै बसेका छौं, खेदिएका एक सदस्यले भने । शहिद स्मृतिको क्वारेन्टाइनमा अध्यक्षका कारण सुरक्षा नहुने रहेछ, आज हामी चेकजाँचका लागि नामजुङ जान लागेको उनले थप जानकारी दिए ।
जिल्लाको शहिद लखन गाउँपालिका वडा नं. ७ स्थित बुंकोटमा रहेको शहिद स्मृति माविमा निर्मित क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकलाई अवधि नपुग्दै तीन दिनको दिन क्वारेन्टाइनमा बस्नेहरुलाई कम्तिमा पनि १४ दिन राख्नुपर्नेमा क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं वडा नं. ७ का अध्यक्ष श्री शरण श्रेष्ठले ३ दिन नपुग्दै शनिबार क्वारेन्टाइनमा बस्ने ७ जनालाई जबरजस्ती धकेलेर घर पठाएका हुन । शहिद स्मृति माविमा निर्मित क्वारेन्टाइनमा ३ दिन अघि चितवन र काठमाण्डौबाट आएका १ बच्चा सहित ५ जना नागरिकहरुलाई राखिएको थियो ।
उनीहरु सबैलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने अवधि नपुग्दै आजै शहिद लखन गाउँपालिका वडा नं. ७ का वडाध्यक्ष शरण श्रेष्ठले घर पठाईदिएको उक्त क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन समितिका सदस्य एवं शहिद स्मृति माविका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिपक खनालको भनाई छ ।
अध्यक्ष श्रेष्ठका भाइखलक उत्तरकुमार श्रेष्ठले आफू गाडीमा हिडेको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेपछि त्यसको साटो फेर्न क्वारेन्टाइनका मानिसहरु छोडिदिएको उनले आफ्नो पार्टी नेपाली काँग्रेस निकटका व्यक्तिहरुसँग बताएका छन् । क्वारेन्टाइनमा राखेका नागरिकहरुलाई धपाउने कार्यक्रममा सोही गाउँपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष काशीनाथ अंगाई समेत संलग्न छन् ।
आफूले क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई लखेटुदा नजिकै रहेकी गाउँपालिका अध्यक्षले केही नभनेको भन्दै वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । वडा अध्यक्ष श्रेष्ठले धेरै ठाउँ हिँडिरहेकोले उनलाई समेत क्वारेन्टाइनमा राख्न स्थानीयहरुले माग गरेका छन् ।
हेर्नै पर्ने प्रेरणादायी जीवन कहानी , यसरी पनि जीवन सम्भव रहेछ (भिडियो)
भ्रमण वर्षमा उपर्दाङगढी र चेपाङ जीवन शैली हेर्न जाऔँ